Ukunciphisa abaDali nabaThengisi | China Ukuchithwa kweDeshedding Factory
DeShedding Isixhobo seZinja
Isixhobo se-1.Deshedding seZinja ezinomphetho wentsimbi engenasici efikelela kwibhotile ukuze ikhusele ngokulula kwaye ngokulula isuse iinwele ezivulekileyo kunye nengubo yangaphantsi.it nayo inokukwazi ukudibanisa uboya obunzulu kunye nokukhuthaza ukujikeleza kwegazi kwesikhumba.
2.Isixhobo sokuhlalisa izinja sinesinyithi esingenasici esigqibeleleyo, sigqibelele kumgca womzimba wezilwanyana ukuba izilwanyana zakho ezithandekayo ziya kuyonwabela ngakumbi inkqubo yokuzilungisa, zilungele iikati nezinja kunye nezinye izilwanyana ezinenwele ezimfutshane okanye ezinde.
Esi sisixhobo sokulahla izinja esinamaqhosha amancinci amancinci, cofa nje enye ukucoca kunye nokususa i-95% yeenwele emazinyweni, gcina ixesha lakho lokucoca ikama.
Ukuchithwa kwenja iBlade Brush
I-1.Ibhokhwe yethu yokuphalaza inja ine-blade ehlengahlengisiweyo kunye nokutshixwa kweziphatho ezinokwahlulwa ukudala i-14 ye-intshi ende yokuphalaza eyenza ukuba ikhawuleze kwaye isebenziseke lula.
I-2.Ibhulashi le-blade yokuphalaza inja inokukhuseleka kwaye isuse ngokukhawuleza iinwele zasekhaya ezincitshisiweyo ukunciphisa ukuphalaza. Unokucoca isilwanyana sakho ekhaya.
3.Kukho izitshixo kwisiphatho, iqinisekisa ukuba incakuba ayizukuhamba ngelixa uzilungisa
Inja kunye neKati yokuLahla isiXhobo seBrashi
Inja kunye neKati yokuLalisa isiXhobo seBrashi ngokukhawuleza, kulula kwaye indlela ekhawulezayo yokususa kunye nokunciphisa i-undercoat yesilwanyana sakho ngemizuzu.
Inja kunye neKati yokuLahla isiXhobo seBrashi ingasetyenziselwa izinja okanye iikati, ezinkulu okanye ezincinci. Inja yethu kunye neKat Cat Deshedding Isixhobo seBrashi sinciphisa ukuphalaza ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-90 kwaye isuse iinwele ezixineneyo nezomileyo ngaphandle koxinzelelo.
Isixhobo seNja kunye neKati yokuDiliza iBhrashi yeenwele ezikhululekileyo, ubumdaka kunye nenkunkuma evela kwidyasi yakho yasekhaya ukuyigcina ikhazimla kwaye isempilweni!
Isixhobo sePet Undercoat Rake Dematting
Esi sixhobo sangaphantsi se-pet undercoat rake dematting sisixhobo seprimiyamu, ukunciphisa inkwitshi, ukuphalaza, iinwele ezixakekileyo kunye nengozi kwizinwele zasekhaya ezisempilweni.
Isixhobo sangaphantsi se-pet undercoat raatting isixhobo sisusa iinwele ezingaphezulu, isikhumba esifileyo esibanjiweyo, kunye nokudumba kwizilwanyana zasekhaya kunokunceda ekunciphiseni ukwaliwa komzimba kunye nokuthimla kwabanini bezilwanyana ezisempilweni.
Esi sixhobo sangaphantsi sangaphantsi sokukrola isixhobo sokuhambisa ngaphandle kwesiliphu, ukubamba ngokulula, iharika yethu yokuzilungisa ayingxami kulusu lwezilwanyana kunye neebhatyi kwaye ayizukubamba isihlahla sakho okanye ingalo yakho.
Ukunciphisa ibrashi yezinja
Iibhloko ezi-1 ezihanjisiweyo zebrashi yokuthoba inja ngokufanelekileyo ukujongana nemethi eneenkani, ii-tangles kunye neebhasari ngaphandle kokutsala. ishiya ibhatyi yakho yasekhaya egudileyo kwaye ingonakaliswa, kwaye inciphisa ukuchitheka ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-90.
Esi sisixhobo esihle kakhulu sokukhulula iindawo ezinzima zoboya, ezinje ngasemva kweendlebe nasemakhwapheni.
3.Lebrashi yokwehlisa inja ine-anti-slip, ukubamba ngokulula iyakuqinisekisa ukuba ikhuselekile kwaye ikhululekile xa ulungisa isilwanyana sakho.